Ny tsy fitovizan'ny taratasy Synthetic sy PP
1 、 Fitaovana horonantsary daholo izany. Ny taratasy sentetika dia fotsy. Ankoatra ny fotsy, ny PP koa dia misy vokany mamirapiratra amin'ny fitaovana. Rehefa vita ny fametahana ny taratasy Synthetic dia azo esorina izy io ary apetaka indray. Saingy tsy azo ampiasaina intsony ny PP, satria hiseho ny hoditry ny voasary ny atiny. 2 、 Satria Synthet ...
Sarimihetsika Holographic PP / PET / PVC Self Adhesive amin'ny horonan-taratasy na takelaka
Famaritana ny vokatra Face material PET / PVC / PP Holographic Adhesive Water base / mafana miempo / azo esorina Sheet size A4 A5 na arakaraka ny filan'ny Roll size Width hatramin'ny 10cm ka hatramin'ny 108cm, ny halavany 100 ka hatramin'ny 1000m na ​​arakaraka ny takiana amin'ny fonosana Fitaovana matanjaka PE coa .. .
marika sy sticker
Labels vs. Stickers Inona no maha samy hafa ny sticker sy ny label? Ny sticker ary ny labels dia samy aorina amin'ny adhesive, manana sary na lahatsoratra amin'ny lafiny iray farafahakeliny, ary azo amboarina amin'ny fitaovana isan-karazany. Samy manana endrika sy habe maro izy ireo - saingy misy tena mahasamihafa azy roa tonta? Lehilahy ...
Karazan-materialy PVC Surface
Mangarahara, fotsy manjelanjelatra, fotsy matte, mainty, mavo, mena, manga mangarahara, maitso mangarahara, manga mazava, manga mainty ary maitso maitso. Ny fitaovana ambonin'izy ireo dia tsy misy sarona, ny hateviny dia azo fidina ho 40um, 50um, 60um 80um, 100um, 150um, 200um ary 250um sns. Ny vokatra dia misy lamba tsy mahazaka lamba, m ...
Karazam-pitaovana PET Surface
Mangarahara, matte mangarahara, fotsy manjelanjelatra, fotsy matte, volafotsy manjelanjelatra, volafotsy matte, volamena manjelanjelatra, volafotsy voadio, volamena voadio. Ny hatevin'ny fitaovana ety ambonin'ny tany dia azo fidina ho 25um, 45um, 50um, 75um ary 100um sns. Fitsaboana amboniny Tsy misy firakotra na fisaronana miorina amin'ny rano. Tsy mahazaka alikaola sy fricti ...
Famaritana simika isan'andro
Ny vokatra simika isan'andro dia mifandray akaiky amin'ny fiainantsika isan'andro. Toy ny fikolokoloana volo, fikolokoloana manokana ary fikolokoloana lamba sns, izay miteraka tombam-bidy ho an'ny fiainana tsaratsara kokoa, raha ny label kosa dia manatsara ny vokatra, mampita ny kolontsain'ny marika ary mankafy ny mpanjifa. Torohevitra momba ny vokatra: (85μm Mamiratra sy fotsy PE / ...
Fiaiken-keloka avy amin'ny marika fitsaboana –Sh Digital
Rehefa tonga ny Coronavirus, ny fitaovana fanoherana ny valanaretina fantatrao dia mety saron-tava, akanjo fiarovana, menaka fanosotra… Nefa nilaza ny governemanta tamin'ny fomba ofisialy fa fitaovana manohana fanoherana ny valanaretina ihany koa ny labels. Mety ho very hevitra ianao ary te hahafantatra ny antony？ Andao hihaino ny ...
azo esorina label-Jade
Ny marika azo esorina dia mampiasa adhesive azo esorina, fantatra ihany koa amin'ny maha-tontolo iainana azy izy io, azo esorina im-betsaka ary misy ambiny. Izy io dia azo esorina mora foana amin'ny sticker iray miverina ary apetaka amin'ny sticker hafa miverina, ny mari-pamantarana dia ao anaty fepetra tsara, azo ampiasaina indray mandeha imbetsaka. Fanesorana ...
Fivarotana mafana: andian-doko mainty sy fotsy vita amin'ny loko famaohana - Mazava-azo!
Ny lamba famafazana dia tsy mitovy amin'ny fampisehoana sy ny fampiasana azy. Izy io dia afaka manavaka azy amin'ny hateviny, ny fahazavana ary ny fitaovana sns. Fampidirana ny vokatra Ny lamba mainty sy fotsy dia antsoina koa hoe lamba boaty maivana na lamba mainty. Izy io dia manafana ny sosona roa ambony sy ambany amin'ny sarimihetsika PVC bobongolo, ...
Inkjet PP tsy azo atoka
Fampahalalana fototra Name: Waterproof Inkjet PP Composition: PP paper + waterproof Inkjet Matt coating hatevin'ny vokatra vita: 80um / 100um Product Features 1. Mety amin'ny mpanonta pirinty, toy ny Epson global, India Technova, England Afinia, China Trojanjet, ary US Quick Famaritana sns ,. 2. Econo ...
Fanasokajiana ny marika
Nozaraina ho karazany roa: Famaritana taratasy, Loko sarimihetsika. 1. Ny marika taratasy dia ampiasaina amin'ny vokatra fanasan-dronono sy vokatra fikarakarana manokana malaza; Ny akora sarimihetsika dia ampiasaina amin'ny vokatra simika avo lenta isan'andro. Amin'izao fotoana izao, ny vokatra fikarakarana manokana malaza sy ny fanasana rano an-trano ...
DIY Heat Transfer hametaka vinitra miraikitra
Endri-javatra vokatra: 1) Vinyl adhesive ho an'ny fanapahana plotter na ny glossy na ny matte. 2) Adhesive maharitra ny tsindry solvent. 3) Taratasy vita amin'ny hazo vita amin'ny silika vita amin'ny kitapo PE. 4) Sarimihetsika kalandrie PVC. 5) Faharetana hatramin'ny 1 taona. 6) fanoherana mahery vaika sy toetr'andro. 7) loko 35+ hisafidianana 8) Transluce ...
Ny maha samy hafa ny taratasy synthetic an ...